Indlu enesitayile kwigadi yaseTropiki
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguWaan & Pil
UWaan & Pil ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu yeendwendwe yabucala kwigadi entle yaseTropiki. Sihlala kumda osemazantsi weBangkok, eSamrong, indawo yendawo ekufutshane nesikhululo sikaloliwe iBTS Sky Ukuthwala kunye neBTS Sky isikhululo sikaloliwe iSamrong. Yahlukile kubakhenkethi abafuna ukufumana icala elahlukileyo leBangkok.
Sibamba amava amabini ebumelwaneni kunye nendawo yentengiso entsha e-Pak Nam. Iinkcukacha ezingakumbi? Qiniseka ukuba ujonge okanye iphepha leprofayile yeefoto kunye nolwazi
Indlu yeendwendwe inomnyango wayo wabucala kwaye ilinganisa malunga ne-40 square metres, ngaphandle kwe-terrace yangaphandle. Kuba ngaphandle nangaphakathi sasisebenzisa izinto zanamhlanje ezidityaniswe neengcango zamaplanga zakudala kunye neekhabhathi. Ukukhanya okucuthekileyo kunye nemithunzi kunye nekhethini kudala ubumfihlo kunye nokuziva kamnandi ebusuku.
Kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi yesofa apho abantu ababini abongezelelweyo banokulala khona. Ikhitshi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukulungiselela isidlo sakusasa (kubandakanywa) okanye isidlo sasemini esilula okanye isidlo sakusihlwa. Ukusuka kwigumbi lokuhlala, iingcango zokutyibilika zinika ukufikelela kwi-terrace kunye negadi apho satyala khona izityalo zebhanana, iifern, ezinye izityalo ezininzi, ingca yaseMalaysia kunye nemithi emihle enika umthunzi wendalo unyaka wonke.
Igumbi lakho lokulala linebhedi enkulukazi enomandlalo obalaseleyo kunye nelinen entle yokulala. En-suite kukho igumbi lokuhlambela langoku elineshawari etofotofo, iitawuli ezininzi kunye nezinto eziluncedo.
4.99 · Izimvo eziyi-250
Indawo yethu yeyasekhaya kunye neyokuhlala. Ezinye zezinto eziphambili ezijikeleze indlu ziquka;
- Imarike yeentlanzi ephakathi ePak Nam. Ukusukela oko kwandiswa umgca wesitimela saseSukhumvit imarike ngoku ifikeleleka ngokulula ngololiwe wesibhakabhaka kwaye ingekude nekhaya lethu. Singakuvuyela ukukunceda ukuba ufike apho kwaye sikunika utyelelo lwabucala olukhokelweyo njengamava akwa-Airbnb.
-Bang Krajao (Imiphunga yaseBangkok). Le ndawo yokuphumla efana nesiqithi yindawo entle yokuchitha ixesha elininzi losuku. Imakethi yempelaveki iBang Naam Phueng kwisiqithi yindawo enemibala ethengisa ukutya okuninzi, ukutya kunye nobugcisa bendawo.
- Indawo yaseSamrong. Ndwendwela itempile yasekhaya kunye nesitrato esincinci eSamrong esikhokelela kuyo. Imakethi entsha yaseSamrong kunye ne-Imperial World Samrong kwindawo enye kufanelekile ukutyelelwa ukuze ubone ubomi basekhaya baseThai.
-Talad Rot Fai Sri Nakarin. Ivula amaxesha obusuku ngeempelaveki. Ukuthenga okuninzi kunye nokutya kolutsha, isihlwele sasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Waan & Pil
Ngexesha okanye ngaphambi kokuhlala kwakho singakunceda ngemibuzo malunga nokuba ungaya phi eBangkok kunye nendlela yokuhamba eBangkok. Ukuba uyathanda, singakunceda ngeeteksi, amatikiti, ukhetho lokubukela kunye nezinye izinto onokufuna uncedo ngazo.
Sihlala siqinisekisa ukuba ukufika kunye nokuhamba kwakho kulungelelaniswa kakuhle. Amaxesha amaninzi omnye wethu uyakwazi ukukwamkela okanye ukukunceda endleleni yakho kusasa okanye xa uphuma.
Ngexesha okanye ngaphambi kokuhlala kwakho singakunceda ngemibuzo malunga nokuba ungaya phi eBangkok kunye nendlela yokuhamba eBangkok. Ukuba uyathanda, singakunceda ngeeteksi, ama…
UWaan & Pil yi-Superhost
Iilwimi: Nederlands, English, Français, Deutsch, ภาษาไทย